Mitombo noho ny fanaovana tatitry ny ady any avaratr’i Mozambika ny fanafihana ireo mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Nilaza ny manampahefana fa 'manakivy' ny tafi-piarovana ny vaovaon'ny fanafihana
Voadika ny 07 Marsa 2020 4:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, English, русский, Español, Italiano, عربي, Ελληνικά, Português
Fiara mifono vy an'ny Tafika mitam-piadiana any Mozambika natao fampisehoana tamin'ny andro fanokanana ny filoham-pirenena Filipe Nyusi, 15 Janoary 2020. Sary: Alexandre Nhampossa, nahazoana alalana
Tsy vitan'ny fanjakana Mozambikana ny manakana ny fanafihan'ny ekstremista izay mamely ny faritany avaratra any Cabo Delgado efa ho roa taona mahery izao. Ankoatra izay dia nitombo ny fandrahonana atao amin'ny mpanao gazety izay mitatitra ny raharaha.
Ohatra, nosamborin'ny tafi-panjakana noho ny tatitra nataony momba ny ady ny mpanao gazety toa an'i Amade Aboobacar sy Estácio Valoi ary ilay mpikaroka David Matsinhe.
Tamin'ny raharaha vao haingana, nanambara tao amin'ny Facebook i Profesora Julião Cumbane fa hampanginin'ny miaramila, ny polisy ary ny sampam-pitsikilovana, izay afaka mampiasa fomba “ivelan'ny fitsarana”, raha ilaina izany, ny mpanao gazety mitatitra ny fanafihana. Nilaza i Cumbane fa “manakivy ireo manana ADIDY hiaro ny firenena ary manome voninahitra ireo mpanafika azy” ny vaovao momba ny ady. Filohan'ny Fikambanana Nasionaly ho an'ny Siansa sy ny Teknolojia ihany koa i Cumbane rehefa notendren'ny governemantan'ny Filoha Filipe Nyusi tamin'ny faramparan'ny taona 2019.
Mitovy tamin'ny zavatra nosoratan'i Egídio Vaz tao amin'ny pejiny Facebook ny voalazan'i Cumbane. Iray amin'ireo mpanolotsaina an'i Nyusi eo amin'ny sehatry ny serasera sady mpitantana ny tambajotra sosialin'ny filoha i Vaz. Nanoratra i Vaz fa tsy tokony “ampiasaina hivarotana gazety” ny fanafihana, ary nambarany fa «masoivohom-baovao» an'ny ekstremista mpanafika ny gazety mitatitra ny fifandirana.
Samy nampatsiahy ny fanambarana ampahibemaso nataon'ny filoha Nyusi i Cumbane sy i Vaz izay nilaza fa “manohitra ny fiandrianam-pirenena” ny gazety sasany mba hilazana ireo izay nitatitra momba ny fanafihana sy nanambara ny mahasaropady ny Fiarovam-pirenena ao Mozambika.
[Os jornalistas em causa] disseminam essa mensagem, escrevem nos seus jornais coisas contra a soberania sem eles terem a consciência que essa defesa está a ser feita por pessoas com grande sacrifício.
Manaparitaka ireo hafatra ireo ny mpanao gazety, manoratra ao amin'ny gazetiny izy ireo manohitra ny fiandrianam-pirenena amin'ny tsy fahafantarana fa fanoloran-tena nanaovan'ny vahoaka sorona lehibe ny fiarovam-pirenena.
Mitombo ny fandrahonana ny fahalalahana maneho hevitra
Nampitandrina ihany koa tamin'ny firongatry ny fandrahonana amin'ny fahalalahana maneho hevitra any Mozambika ny Ivontoeran'ny Fampahalalam-baovao any Atsimon'i Afrika. Nampitandrina ny vondrona fa mikendry manokana mpanao gazety mitatitra ny fanafihana ny fandrahonana. Nanameloka ihany koa ny fanafihana amin'ny fampitam-baovao ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena Foiben'ny Demokrasia sy ny Fampandrosoana ary nanoro hevitra ny mpanao gazety hanohy ny adidiny amin'ny fampahafantarana ny vahoaka.
Manameloka tanteraka ny fandrahonana atao amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny CDD ary manohana ny mpanao gazety, [ary] mankahery azy ireo hanohy hampahafantatra amin'ireo Mozambikana sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny momba ny fanafihana tany Cabo Delgado.
Fanavaozam-baovao momba ny vokatry ny fifandonana
Olona tsy fantatra mitam-piadiana ireo mpanafika, mandoro trano, manafika sekoly, hopitaly sy fotodrafitrasa hafa, nandroba entana any amin'ny toeram-pivarotana tsy miankina, naka an-keriny vehivavy, ankoatra ny tranga hafa.
Nanombatombana ny masoivohon'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoa-ponenana, UNHCR, fa maherin'ny 100.000 ireo vahoaka nafindra toerana noho ny herisetra tafahoatra. Nilaza tamin'ny UN News momba ny toe-javatra miharatsy tany an-toerana ny iray tamin'ireo manampahaizan'ny fikambanana.
Niresaka tamin'ny mpitsoa-ponenana iray izay voatery nandositra tao amin'ny nosy Matemo aho. Voatafika ny tanànakely. Nijanona teo ny iray tamin'ireo ankizy mba hiezaka hamonjy ireo fananan'ny fianakaviana sasany ary nitondra izany nanaraka azy ireo. Tratran'ny iray tamin'ireto vondrona mitam-piadiana ireto izy ary notapahan-doha.
Mihoatra ny 900 ny olona efa maty hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana tamin'ny volana Oktobra 2017, araka ny vaovao navoakan'ny gazety Afrikana Tatsimo Independent Online .
Niteny ankolaka ny filoha Nyusi raha mbola mitombo ny isan'ny maty fa misokatra ny fiaraha-miasan'ny governemantany amin'ny firenena hafa ankehitriny izay arahana fepetra sasantsasany amin'ny ady amin'ny fanafihana. Namaly izany i Etazonia sy Rosia, izay vonona avy hatrany ny hanolotra ny fanampiany.
Misy fiantraikany amin'ny famatsiam-bola vaovao ao amin'ny faritany ihany koa ny zava-misy amin'ny tsy fandriam-pahalemana, izay ivon'ny fifantohana amin'ny fametrahana tetikasa lehibe miisa telo ho an'ny famokarana etona voajanahary avadika ho ranony, miaraka amin'ny famatsiam-bola mitentina 50 miliara dolara Amerikana.